Kiiskeenna Jinsiyadda Saint Lucia
Kiiskeena Dhalashada Saint Lucia
Waxaa jira arrimo badan oo la tixgelinayo marka la dooranayo waddan muwaadinimo maalgashi. Waxaan ku diyaarinay muwaadinimo barnaamijka maalgashiga si aan ugu dhigno himilooyinka dhamaan codsadayaasha mustaqbalka. Laga soo bilaabo afar meelood oo maalgashi oo noo gaar ah, illaa xadka sanadlaha ah ee maalgashadayaasha caanka ah, iyo ka qeyb qaadashadayada dhaqameed ee xiisaha leh, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku raaxeysato nolosha iyo barwaaqada nala.
Kharashka maalgashiga Saint Lucia ujeedada helitaanka dhalashada ayaa loo dejiyay inuu la mid noqdo barnaamijyada la midka ah. Codsadeyaashu waxay leeyihiin ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo ah afar ikhtiyaar oo u dhexeeya qadarka maalgashiga US $ 100,000 illaa US $ 3,500,000 hal codsade. Codsadayaasha waxaa sidoo kale laga filayaa inay bixiyaan khidmadaha wax lagu qabanayo iyo maamulka ee la xiriira codsigooda.
Codsiyada muwaadinimada maalgashiga ee Saint Lucia waxaa laga baaraandegi doonaa seddex bilood gudahood laga bilaabo marka codsiga la aqbalo ka baaraandegida Qaybta Maalgashiga.
Sanadka 2019, Muwaadiniinta Saint Lucian waxay haysteen fiiso la'aan ama fiiso markii ay soo galeen in ka badan boqol iyo afartan iyo shan (145) dalal iyo dhulal, waxay ku qiimeeyeen baasaboorka caadiga ah ee Saint Lucian 31aad ee adduunka marka loo eego warbixinta Henley Passport Index iyo Warbixinta Caalamiga ah ee Dhaqdhaqaaqa. 2019.
Muwaadiniinta Saint Lucian waxay ku raaxeysan karaan helitaanka wadamo badan oo ay ku jiraan kuwa ku jira Midowga Yurub, qeybaha kale ee Caribbean iyo Koonfurta Ameerika.
Saint Lucia waxay leedahay nolol tayo leh oo ay ka buuxdo meelo aad u yar oo adduunka ah. Waxaan leenahay heerka dambiga oo aad u hooseeya, helitaanka tas-hiilaad casri ah, adeegyo iyo kaabayaal, makhaayado heer caalami ah iyo hoteello iyo dhismeyaal ganacsi oo heer sare ah.
Deggeneyaashu waxay leeyihiin ikhtiyaar ah inay ku noolaadaan xeryaha waaweyn ee dadweynaha ama u dhaw xasiloonida baadiyaha si ay ugu raaxaystaan ​​nolol cagaaran. Waxay qaadataa saacad in lagu safro woqooyi ilaa koonfurta jasiiradda maalin taraafik, sidaa daraadeed meel aad u fog ma jiro.
Waxaan ku raaxeysanahay heerkulka celceliska celcelis ahaan inta udhaxeysa 77 ° F (25 ° C) iyo 80 ° F (27 ° C) sanad ku wareegsan cimilada kuleylka kulul oo isku dheellitiran dabeylaha ganacsiga waqooyi-bari. Roobka badankood wuxuu socdaa dhowr daqiiqo oo keliya mar marka laga reebo haddii ay jirto qaab cimilo caan ah oo ciyaarta lagu ciyaaro.
Qof kasta oo dhalashada ka codsanaya maalgashi Saint Lucia waa inuu taas ku sameeyaa wakiilka rukhsad u leh. Liistada Dukumentiga Dukumentiga ah SL1 ayaa la siiyay codsade kasta. Liiska Liistada Dukumiintiga wuxuu faahfaahin ka bixiyaa codsade walba waa inuu bixiyaa si codsigoodu u dhammaado.